ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: အမေစုနဲ့..ဦးအောင်ဆန်းဦး ကိုအမွေတ၀က်စီခွဲ ယူဘို့.အမိန့်ချလိုက်ပြီ.
အမေစုနဲ့..ဦးအောင်ဆန်းဦး ကိုအမွေတ၀က်စီခွဲ ယူဘို့.အမိန့်ချလိုက်ပြီ.
အမေစုနဲ့..ဦးအောင်ဆန်းဦး ကိုအမွေတ၀က်စီခွဲ ယူဘို့..ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရုိုင်တရားရုံးက..၂၂ရက် ဇွန်လမှာ..အမိန့်ချလိုက်ပြီ..။အမေ့အိမ်ကို..အဲ့လူကြီးလာလုတော့မှာလား..။Favourite News ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမိုင်းနဲ့ အမျိုးဂုဏ် မပျောက် မပျက်ရစေအောင် ထိန်းသိမ်းကြပါစို့။
မြန်မာ့တရားရေးက အခုမှ တရားမျှတနေပါရောလားကွယ်။ ဒီလောက် သမိုင်ဝင် ရာဇဝင်ရှိတဲ့ မြန့်မာရတနာတပါးလို သတ်မှတ်ထားရမဲ့အိမ်ကြီးပါ။ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ ကမ္ဘာခေါင်ဆောင်တွေ လာရောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်တော် မင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ် ဒီမိုကရေစီထွန်းတောက်ခဲ့သည့်နေရာ ဦးအောင်ဆန်းဦးကတော်တော် မယ်ဘော်မ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းက ကဲဖြစ်နေတာ။ဗိုလ်ခင်ညွှန်လက်ထက်မှာလည်း ဗိုလ်ခင်ညွှန့်နဲ့ သူအဖွဲသားတွေ လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းနဲ့ပေါင်းပြီး အန်တီစု လမ်းဘေးမှာနေရအောင် အကျင့်ဝိုင်း
ယုတ်ခဲ့ကြတာရှင့်။ အဲ့တော့ ဒီအိမ်ကြီးက ဦးအောင်ဆန်းဦးကို တဝက်အမ်းရရင်လည်း ပြည်သူတွေ တစ်ယောက် ၁၀၀ကျပ်စုပြီးထည့်ရင် ဟိုအမျိုးသမီး ဦးအောင်ဆန်းဦးကတော်မ ကြိုက်တဲ့ငွေမက ရလောက်ပါတယ်။ ဒီအိမ်ကြီးတော့ အပျောက်အပျက်မခံနိင်ပါဘူးရှင်။ အားလုံးကြိုးစားကြဘို့ နိူးဆော်လိုက်ပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်..။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:27 PM
Fly fly Up To The Sky လူထုဦးစိန်ဝင်း(1940-2012)
"လက်ခုပ်စည်သံ ... ဘ၀ဂ်ညံလိမ့်"
ဂျွန်လ ယခုလထုတ် ABMA ဂျာနယ်
ရခိုင် ကျောင်းဆရာ အသက်လုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ဦးထွန်းမင...
တူညီတာတွေ တွဲလုပ်ပြီး မတူညီတာတွေ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက...
ဒေါ်စု၏ ပုဂ္ဂလိက ခရီးစဉ်အတွက် နိုင်ငံတော်မှ သတင်းထုတ...
မောင်သာနိုး (သို့မဟုတ်) ညီညွတ်ရေးကို ဖြိုခွဲသူ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်ပမြန်မာသတင်းမီဒီယာများနဲ့ သ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ရှိနေထိုင်တဲ့အိမ်ကို အကိုဖြ...
သမိုင်း ကို မသိရင် “အ” တယ်၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများကို ပြောဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အေ...
ဒီလှိုင်း စာစောင်ရဲ့ ဂုဏ်ပြုကဗျာ များမောင်မေခ။ဆွေနွ...
အမေစုနဲ့..ဦးအောင်ဆန်းဦး ကိုအမွေတ၀က်စီခွဲ ယူဘို့...
လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊(ဂ)တိ...
ဂျပန် မှ နိုင်ငံခြား သားကဒ် Zairyu Card(သို့မဟုတ်)...
ကမ္ဘာဦးရဲ့ နေ့ လိုပဲ နွေနံနက်ခင်းရဲ့ လှပုံထူး